Fedy, chishandiso chekugadzirisa kweFedora | Linux Vakapindwa muropa
Fedora 22 iri pano maawa mashoma apfuura, uye sezvazvinowanzoitika neizvi uye huwandu hwakawanda hwekuparadzirwa kukuru kweGNU / Linux, chokwadi ndechekuti hatimbove nezvose sezvatinozvida patinongopedza kuisa asi kazhinji tichazoda wedzera zvinhu uye zvinhu. Ndosaka tichida kuunza Fedy, chishandiso chakagadzirirwa kurerutsa Fedora kumisikidza zvakanyanya sezvinobvira.
Ichi chishandiso pakutanga chaidaidzwa kunzi Fedora Utils uye chaive chakanaka kwazvo, asi kubva ipapo yauya nzira refu kuti ive zvazviri nhasi: a chaiyo swiss mauto banga reRed Hat rakagadzira vashandisi ve distro, sezvo isingotibvumire isu chete gadza multimedia codecs, mafonti uye zvinoshandiswa asiwo mapulagini, kusanganisira maviri akakosha akadai seOracle Java kana Adobe Flash.
Chimwe chinonakidza chiitiko cheFedy kutitendera gadzira masevhisi eFedora kuitira kuti tirege izvo zvisina kukosha, kuti tiwane kushanda kwakanyanya kwesisitimu yedu, kana kuti uwane kutanga nekukurumidza. Asi hazvisi izvo zvese, uye isu tinogona zvakare kuwedzera vashandisi kune vevateveri runyorwa kana kugadzirisa nyaya dzekupinda (semuenzaniso, kana tichishuvira isu tinokwanisa kumisikidza otomatiki login kubva pano).
Nezve izvo zvinodzoka mukati Fedy 4.0, yakaburitswa maawa mashoma apfuuraIcho chinongedzo chakanyorwazve zvakazara muGTK3 uye nyowani nyowani ine simba yakawanda uye yakazara yekutsvaga, pamwe nerondedzero yakadzama yezvinhu zvese zvatinogona kuisa nekugadzirisa kubva pane ino sisitimu.
Para gadza Fedy pane Fedora 22 isu tinoita zvinotevera kubva kune terminal hwindo (Ctrl + Alt + T):
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Fedy, chishandiso chekugadziriswa kweFedora
GNU / Linux zano rezuva racho: tumidzazve mafaira muhuwandu